2. september 2021 - NorSom News
Hussein: Taariikhda xisbiyada Norway iyo nidaamka doorashada: Sababihii xisbiyada loo aas-aasay.
Norsomnews - 2. september 2021
FHI: Dadkan ayaa heli doono irbada sadexaad(3) ee talaalka corona.
Norway oo 860 qof hal mar kasoo qaaday dalka Afgaanistaan.
Nin loo xukumay hanjabaad uu Facebook qof kale ugu qoray.
M. Cali-qood: Odoyaasha soomaaliyeed ee Norway arrintan ay dhalinyaradu sameeyeen, ha sameeyeen.
(Video)-Muhiim: Qaabkan ayaad codka uga dhiiban kartaa goobaha codbixinta doorashada Norway.